Akụkọ - Nhicha na ndozi rollers roba
Nhicha na mmezi kwa ụbọchị nke rollers roba
Oge na-edozizi kwa ụbọchị nke anilox roller nwere ike ịgbatị ndụ ọrụ ahụ, bulie ojiji ahụ, ma weta nnukwu elele.
1. Ntughari ohuru na-agba ọsọ
O gwụla ma ọ bụ njedebe ikpeazụ, ejirila ọhụụ ọhụrụ mee ihe iji kwado iwu dị mkpa. Ọ bụ ezie na mpịakọta anilox agbanweela nsị, ịkpụchasị na usoro ndị ọzọ tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ, wee bụrụ nke ebula ụzọ, ọ nwere ike belata nchacha nke mkpochapu n'oge eji eme ihe, mana nke a apụtaghị na mkpa ọ dị ịgba ọsọ n'oge eji mpịakọta ọhụrụ eme ihe nwere ike ileghara Mmekọahụ anya. Mgbe mpịakọta ọhụrụ ahụ ka etinyere na igwe, payaa ntị na ya n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na e nwere ahịrị, kwusi ma hichapụ ihe mkpuchi ahụ n'oge. Na ọnọdụ ọrụ n'ozuzu ya, ike nke ahụ adịghị ezu iji mee ka ihe mkpuchi anilox dị, mana anaghị achịkwa ya na ụfọdụ obere obere ihe siri ike na-emetụta mgbidi ahụ n'okpuru ọrụ nke scraper iji mepụta obere seramiiki mpempe akwụkwọ. na agụba nke scraper, ihe na-erughị otu. Oge mgbanwe a ga-egweri akara akara a na-apụghị ịgbagha agbagha, na n'ọnọdụ ndị siri ike, a ga-ekpochapụ ahụ igwe. Nke a bụkwa ihe kpatara ndị ọrụ na-ejikarị eme mkpesa na ndị ọhụụ ọhụrụ na-enwekarị nsogbu karịa ndị rollers ochie. N'ozuzu, mgbe izu 2-3 na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-ekwu okwu, mgbidi ihuenyo ahụ adịghị enwe mmetụta na mmetụta nke ahụ siri ike mgbe ink, dọkịta agụba, na efere na-emetụta ya.
2. Mechie maka imeputa
Ọ bụrụ na igwe ahụ akwụsị nwa obere oge, ihe analox roller kwesịrị ka ọ na-agbagharị. Mgbe igwe na-emechi ruo ogologo oge, na anilox ala kwesịrị ka ikewapụ akpụcha na oge, esighi ike na roba mgbali ala, na hichaa sere n'elu ink, iji zere mkpumkpu ink ọkọnọ ke kwụ uzo ma ọ bụ ike ọcha mgbe ink akọrọ.
3. Scraper imekọ ihe ọnụ
Ọkpụkpụ dị elu bụ ihe dị mkpa iji hụ na ahụmịhe nke iji anilox mpịakọta. Isi ike nke scraper kwesịrị ekwesị, ọ gaghị esikwu ike. Shapedị nke mbepụ ahụ kwesịrị ịdị mma ma attentionaa ntị na nnọchi.
4. Ink nhicha
Ink dị ọcha bụ ihe dị mkpa maka igbochi ọkọ na anilox roller.
5. Ink dee nchọpụta nke anilox ala
Ọ bụ ezie na seramiiki seramiiki nwere nnukwu ekweghị ekwe na ogologo ndụ ọrụ, ha ga-akakwa nká ka oge ojiji na-abawanye. N'ihi nke a, ikike inyi ink nke ihe eji emegharị anilox ji nwayọ belata na-abawanye oge. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ iduzi a ọzọ tozuru etoju na mbara management nke anilox ala, mkpa ka ị na-achọpụta mgbe nile n'ezie ink ikike nke anilox ala.
Ebe ọ bụ na ugboro ole ọrụ a anaghị adị oke mkpa, ọ bụkwa ezigbo nhọrọ ịnye ọrụ a n'aka anilox mpịakọta soplaya.
· Anịlox roller kwesịrị ịchekwa n’ebe akọrọ n’ime ụlọ iji gbochie ya ide mmiri, mmiri ozuzo ma ọ bụ anwụ.
· Mgbe ị na-edochi ihe nkedo anilox, kpuchido ihu ala iji gbochie mmebi mmebi. Mgbe ị na-echekwa, jiri ngwugwu ejiri eriri sitere na iji kechie ala.
· Mgbe ị na-echekwa, dozie ihe mgbakwasa na nkwado pụrụ iche, etinyekwala ala na mbara ala ahụ.
· Mgbe ị na-agagharị, ọ dị mkpa ịgafe isi osisi ndị dị na nsọtụ abụọ nke ala ahụ ka ha wee ghara izere esemokwu na nkwekọrịta nkwekọrịta.
· Mgbe ọ bụla ebi akwụkwọ ma ọ bụ mkpuchi, elu nke ala a ga-kpochara na oge iji zere fọdụrụ ink ma ọ bụ mkpuchi slurry ekpe na ala nke ntupu nkụ na-egbochi.
· Na-ejikarị microscope ntupu maka nyocha, ma mee ihe kwekọrọ na ya ma ọ bụrụ na ịchọta na mgbochi.
· Ejila nrụgide na-arụ ọrụ site na ị gbanwee ego mbufe, nke ga-eme ka abrasion nke anilox roller na scraper ka njọ.
Adịgharịkwala mpịakọta anilox na-adịghị mma megide agụba dọkịta.
· Ikwesiri ịtọgharị nrụgide nke scraper oge ọ bụla ị melite ya, na ọnọdụ nrụgide na-ezighi ezi ga-eme ka iberibe iberibe ihe.
· Kwụsị iji ihe nchacha ahụ nke gafere akwa kacha elu, guzobe usoro kwa ụbọchị maka ileba anya na akwa ahụ, ma chịkwaa uwe nke ihe ncha ahụ.
· Debe ihe mkpocha ahụ na ihe ọkpụkpọ oge niile, ma dezie ya na oge.
Do Ejila ink dị ala ma na-ete slurry.
· Wepu ájá n’elu ngwaahịa e biri ebi ma ọ bụ ihe nkpuchi etinyere tupu ị bipụta iji mee ka ọ dị ọcha.
· Jiri ezi ntupu omimi na oghere ruru.
01. Akara akpa
Reason analysis: Ihe kpatara ọkọ ndị ahụ n’elu nke seramiiki anilox ala bụ na ike obere ahụ na-agwakọta ke ink. Mgbe dọkịta agụba scrapes ink, obere ahụ dị n'etiti dọkịta na agụba na ink ala ọkọ ọkọ seramiiki elu. Dị obere ihe siri ike dị otú a nwere ike ịpụta site na ngwongwo ígwè nke dọkịta na-ada ma ọ bụ mgbapụta ink, akọrọ ink siri ike, ma ọ bụ adịghị ọcha.
Wụnye ihe nzacha na ihe ndọta ndọta na usoro ntinye ink iji wepụ ihe ndị mebiri emebi ma ọ bụ nke gbanwere
Mee ka nhicha nke akụkụ ink nke usoro ihe niile sie ike iji gbochie ọgbọ nke akụrụngwa akọrọ
· Mgbe ị na-eji ime ụlọ ink eji mma dee, e kwesịrị inwe ink zuru ezu iji gafere site na oghere ahụ, nke mere na scraper ahụ zuru oke lubricated na-ewepụ abraded edemede ahụ
02. Uwe adịghị mma
· Ntinye nke ihe nchacha ahụ enweghị ike na ike adịghị
· A na-eme ka ihe nchacha ahụ sie ike ma ọ bụ na-ezughị ezu
· Ogo nke oyi akwa seramiiki adịghị ka ọkọlọtọ
· Wụnye mpempe akwụkwọ nke ọma ma dozie mpempe akwụkwọ ahụ tupu etinye ya
Jiri nlezianya hichaa onye na-ejide mma na akwa mkpuchi
· Mee ka ogo nke seramiiki dịkwuo mma
· Mee mmanu mmanu
03. Ikpoko mesh
Ebumnuche nyocha: ọrụ nhicha ahụ mgbe analox roller na-eji eme ihe abụghị oge na ezughi oke
· Hụ nhicha nhicha nke ntupu na microscope magnification kwesịrị ekwesị
· Mee ka nhicha nke anilox roller dịkwuo ike mgbe ọ bipụtara
04. Mmebi aru
· Direct nkukota na ihe siri ike na-akpata mmebi nke seramiiki oyi akwa
· Cleaningzọ nhicha na-ezighi ezi na nhọrọ nke nchịkọta akwụkwọ nwere ike imebi mgbidi ntupu
· Mee ka echiche nke ibu ọrụ sie ike iji zere ihe mberede okporo ụzọ
· Mgbe apụ-igwe nchekwa, tinye na-echebe mkpuchi nke ụkpụrụ ala
· Nghọta miri emi banyere njirimara nke usoro nhicha dị iche iche, họrọ usoro nhicha kwesịrị ekwesị, nye egwuregwu zuru oke maka uru nke usoro ahụ, ma zere nsogbu nke usoro ahụ nwere ike ibute
· Gụọ ntụziaka nke ngwa ngwa nhicha ma ọ bụ ihe nhicha zuru ezu, ma họrọ oke ọrụ ha n'ụzọ ziri ezi
05. Nrụrụ na blista
Nkọwa nke ihe kpatara ya: Nke a na-ebute site na nchara nke isi ihe nke anilox roller, nke na-eme ka ihu elu anilox na-ehulata, na n'ọnọdụ ndị siri ike, ọ na-eme ka seramiiki dị na mpaghara daa.
· Mgbe ị na-enye iwu seramiiki anilox rollers, biko gosi ebe ojiji nke anilox rollers. Ọ bụrụ na ọ bụ acid siri ike na gburugburu alkali siri ike, onye nrụpụta kwesịrị iwusi usoro mgbochi mmebi ike ike.
· Jiri igwe anaghị agba nchara dị ka isi mpịakọta ihe
· Zere iji nke siri ike acid na ike alkali chemical ihicha mmadụ maka nhicha anilox ala
A ga - ekewa usoro ndị a na - ehicha anilox na ụzọ ndị a:
1. Jiri pụrụ iche pụrụ aniyix nhicha gị n'ụlọnga, na nchara nchara ma ọ bụ nano ogbo maka online ihicha.
2. Jiri igwe nhicha ultrasonic nwere ihe nhicha pụrụ iche maka nhicha.
3. Nnukwu mmiri na-ehicha mmiri
4. Laser ihicha.
· Nchara ahịhịa, nano ogbo
Uru: nhicha dị mma, enweghị mkpokọta na mgbakọ, ọrụ dị mfe, nhicha zuru oke, enweghị akụrụngwa, na ọnụ ala.
Ọghọm: A chọrọ ihe pụrụ iche na-ehicha alkaline. N'ihi na ụfọdụ ndị isi ike inorganic bekee, mmetụta adịghị mma dị ka ultrasonic ihicha.
· Nnukwu mmiri na-ehicha mmiri
Uru: Dị ka gburugburu ebe obibi dị mma na nchekwa, yana mmetụta nhicha dị mma.
Ọghọm: Thegwọ akụrụngwa dị elu. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ka dị mkpa iji ihe mgbaze iji tinye ya na seramiiki anilox tupu ịgbanwuo nhicha mmiri dị elu, ma a ka nwere ọnụ ahịa ndị na-eri ihe.
Uru: Enweghị ọrụ aka ọ bụla achọrọ, na mmetụta ọ na-enwe na mgbochi isi ike doro anya.
Ọghọm: 1. Akụrụngwa dị oke ọnụ, na ihe nhicha nhicha ka chọrọ na mgbakwunye na akụrụngwa;
2. Nchịkọta ihe ntinye ultrasonic chọrọ nkenke, ọ dịkwa mkpa iji nyochaa n'ụzọ ziri ezi na-ekpuchi ihe mkpuchi nke anilox ma nye ya ọgwụ ziri ezi, ma ọ bụghị ya nwere ike imebi ihe anilox roller;
3. Ihe eji eme ihe na-achọ obere oge. Iji nhicha ultrasonic mgbe nile nke anilox roller ga-emebi mgbidi ahụ ntupu ma na-emetụta ndụ ndụ anilox ozugbo.
· Laser ihicha
Uru: Mmetụta nhicha bụ nke kachasị dị ọcha na nke zuru oke, obere ume ike, ọ dịghị ihe ndị ọzọ achọrọ, ọ dịghị mmebi nke anilox roller, a pụkwara ihicha ya na ntanetị na-enweghị disassembly nke anilox roller, karịsịa kwesịrị ekwesị maka ihicha nnukwu anilox rollers.
Ọghọm: Ngwa a dị oke ọnụ.
Usoro nhicha ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, yana otu esi ahọpụta ya kwesiri ka ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ kpebisie ike dịka ọnọdụ ya si dị.
N'agbanyeghị usoro nhicha ahụ, ndị ọrụ nhicha acidic na okpomọkụ na iru mmiri ndị ọzọ bụ ihe abụọ na-elegharakarị anya na-eme ka igwe anilox na-ebuwanye ibu. N'iji ya tụnyere gburugburu ebe obibi alkaline, gburugburu ebe obibi acidic nwere ike ime ka mkpụrụ ahụ mebie n'okpuru akwa seramiiki. Ya mere, mgbe ọnọdụ ọrụ bụ acidic na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, ọ ga-akọwapụtara tupu ya na onye nrụpụta mgbe ị na-ahazi ya, ka enwere ike ịme ọkwa kwekọrọ na ọgwụgwọ mgbochi. Na mgbakwunye, ahụmịhe egosila na na mpaghara ụfọdụ ogbako nwere oke okpomọkụ na iru mmiri yana gburugburu ebe obibi na-eji ọtụtụ ihe mgbaze, a na-etolite oyi akwa mmiri na-acha n'elu mmiri anilox. A ghaghị ihichapụ ya n'oge n'oge nchekwa ma chekwaa mgbe ihicha. Mpempe anilox ahụ dị ọcha kwesịkwara nkụ tupu ị banye na nchekwa nchekwa.
Post oge: Apr-16-2021
Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Hot gbazee gluu Ngwa, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo,